ကိုသန်းလွင် ● လေထုညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် လူ၏ကျန်းမာရေး – MoeMaKa Burmese News & Media
January 17, 2018 Aung Htet
(မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၈
လေထုညစ်ညမ်းခြင်းမှာ ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးမှ လူတို့၏ကျန်းမာရေးကို ခြိမ်းချောက်လျှက်ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် သွေးတိုးခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ သွေးချိုခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်းစသည့် အန္တရာယ် လေးမျိုးတို့နှင့်အလားတူ လူကို အကြီးအကျယ်ဒုက္ခပေး နိုင်ပါသည်။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်က တကမ္ဘာလုံးသေနှုန်း၏ (၈) ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးမျှ မကောင်းသောလေထုကို ရှူရှိုက်မိရင်း လူတို့ သေခဲ့ကြရပါသည်။
ညစ်ညမ်းသောလေထုနှင့် ကာလကြာရှည်နေကြရသူများအဖို့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ ပိတ် ဆို့ခြင်း၊ အဆုပ်ရောဂါ၊ နှလုံး Attack ရခြင်းနှင့် အဆုပ်ကင်ဆာများနှင့် ဆပ်စပ်နေတတ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်ရသူများကို ပြင်ပ မှာ ဆေးလိပ်ငွေ့ (Out door smoking) များကို ရှူရှိုက်နေရသကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။
လေထုကို ညစ်ညမ်းစေသောအရာများတွင် ဥပမာ နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုက်များ (NO နှင့် NO2, NOX ဟု လည်း ခေါ် သည်) သည် အိုဇုံး O3 ဓါတ်ငွေ့နှင့်အတူ သေးငယ်သောအမှုန်များပါဝင်ကြရာ ၎င်းတို့ကိုထိန်းချုပ်သောနည်းသည် ရှိရပါ မည်။ သေးငယ်သောအမှုန်များ ၂ . ၅ မိုက္ကရိုမီတာ (Particulate Matter PM2.5 ဟုခေါ်သည်) ထက်သေးငယ်သော အမှုန် များသည် လူတို့၏ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် အရွယ် အစားသေးငယ် သောကြောင့် လူ၏အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှင့် အဆုပ်အထိထိုးဖောက်ရောက်ရှိနိုင်ကြပါသည်။
တကမ္ဘာလုံး၏ (၉ဝ) ရာခိုင်နှုန်း လူအများ (၇ ဘီလီယံ) မျှသည် WHO – World Health Organization ကသတ်မှတ်ထား သော တစ်နှစ်လျင် (၁ဝ) မိုက္ကရိုဂရမ်ထက်ပိုသော (PM2. 5) လေကို ရှူရှိုက်နေကြရပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင် ၄.၅ သန်းမျှသော လူများသည် ပြင်ပမှလေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့် သေဆုံးကြရပါသည်။ ထိုလူများ၏တဝက်မှာ တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယပြည်တို့၌ နေထိုင်ကြပါသည်။ ရုရှားမှာမူ လူ ၁ဝဝဝ တွင် ၁.၆ မျှသေကြေနေကြရပြီး သေနှုန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောလေကို ရှူရှိုက်ရလျှင် နေရမည့်အချိန်ထက် လူတို့် ၂၈ နှစ်မျှ စော၍သေကြရပါသည်။
နိုင်ငံများစွာတို့တွင် ရောဂါမဖြစ်စေရန်၊ လူအသေအပျောက်မရှိစေရန် ထုတ်ထားသောစည်းကမ်း နည်းလမ်းမရှိပါ။ လူတို့၏ ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်ရအောင် ဥရောပကောင်စီကသတ်မှတ်ထားသော တစ်နှစ်လျင် ၂၅ မိုက္ကရိုဂရမ်မှာ ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ်တွင် ၂ဝ မိုက္ကရိုဂရမ်သို့ လျှော့ချပါမည်။ သို့ပါလျက် ဥရောပကောင်စီအတွင်း ၂၇၄,ဝဝဝ မျှသေဆုံးရမှုမှာ လေထုညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၁၅ မိုက္ကရိုဂရမ် မျှသတ်မှတ်ထားပြီး ၇၉,ဝဝဝ မျှ သေကြေရပါသည်။ အမေရိကားတွင် ၁၂ မိုက္ကရိုဂရမ်သတ်မှတ်ထားပြီး ၁၁၅,ဝဝဝ မျှ သေကြရပါသည်။
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပညာရှင်များက လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် ရောဂါသေဆုံးမှုတို့ကို ဆက်စပ်နိုင်ကြသော်လည်း အသေးစိတ် လေ့လာစရာများ များစွာကျန်ပါသေးသည်။ မည်သည့်အမှုန်အမျိုးအစားသည် မည်သည့်ရောဂါကိုဖြစ်စေသည်ဆိုသော အချက်မှာ မရှင်းလင်းသေးပါ။
လေထု၏အရည်အသွေး (Quality) သည် လူတစ်ဦး၏သက်တမ်းကိုဆုံးဖြတ်ပါသည်။ လေထု၏ ဓါတုဗေဒဖြစ်စဉ်များက လေထုညစ်ညမ်းစေသောအရာ (Pollutants) ၏အသက်အတိုင်းအတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။ ထိုနှစ်ခုကို ဆက်စပ်ကြည့်ဖို့ ရာမှာ ရိုးရှင်းလွယ်ကူခြင်းမရှိပါ။
ပထမအချက်မှာ ပြင်ပလေထုညစ်ညမ်းဖြင်းအတွက် တရားခံမှာ မြောက်များစွာရှိပါသည်။ အိမ်များကိုအပူပေးခြင်း အစားအ သောက်ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများတွင် မီးဖိုခြင်းများသည် အဓိကဖြစ်ပါသည်။ ဤဖြစ်ရပ် ကြောင့်အကြမ်းအားဖြင့် လူ ၁.၃၅ သန်းကျော်မျှ သေကြရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးမှာ နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအချက်တချက်ဖြစ်ပါသည်။ ငါးပုံတပုံ မှာ ဤနည်းဖြင့် သေကြရပါသည်။ လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်များ၏ ချေးများမှ အမိုးနီးယားကိုထုတ်လုပ်ပါသည်။ ထိုအမိုးနီးယားသည် လေထုထဲတွင်ရှိသော ဆာလဖိတ်နှင့်နိုက်ထရိတ်များနှင့်ပေါင်းပြီး အမိုးနီးယမ်ဆာလဖိတ်နှင့် အမိုနီယမ်နိုက်ထရိတ်တို့ အ သီးသီးဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ထို PM2,5 အမှုန်များသည် လူကိုဒုက္ခပေးပါသည်။ စွမ်းအင် (သို့) ပါဝါထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ကားများမှ လည်း ထိုကဲ့သို့အမှုန်များထုတ်ပါသည်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် လေထုအတွင်း ဓါတုဗေဒပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပုံမှာ နားလည်ရန်ခက်ခဲပြီး အလွန်ရှုပ်ထွေးပါသည်။ လူ တို့၏လုပ်ရပ်များနှင့် သဘာဝကြီးကထုတ်လုပ်သောကြောင့် အိုဇုံးနှင့်အမှုန်များ ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာကြသည်။ ထို အရာများသည် အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ လေကြောင်းပျံ့လွင့်မှုတို့က ညစ်ညမ်းမှုအဆင့် (Level) ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။ ထိုအမှုန်များကို လူတို့က ရှူရှိုက်ကြသလို လေထုအတွင်းတွင် ပျံ့လွင့်ပြီး ရက်ပေါင်းများစွာတည်ရှိနိုင်ကြသည်။
တတိယအချက်အနေဖြင့် ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်စေသော အရာများသည် တခုနှင့်တခု ဓါတုဗေဒပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်များအတိုင်း ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဥပမာ အိုဇုံးဓါတ်ငွေ့၏ပါဝင်နှုန်းသည် NOX နှင့် VOC Volatine Organic Compound ခေါ် အော်ဂဲနစ် ကွန်ပေါင်းများနှင့် နေရောင်ခြည်ဓါတ်ပြုမှုအပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့် အိုဇုံးဓါတ်ငွေ့ကိုဖယ်ရှားရန်အတွက် အဆင့် တဆင့်တည်းဖြင့်မရတော့ပေ။ ဥပမာ ဥရောပကောင်စီက VOC များကို သက္ကရာဇ် ၂ဝဝဝ မှစတင်၍ ၂ – ၃% လျှော့ချ ရန်ကြိုးပမ်းနေချိန်တွင် အိုဇုံး Level က ကျမသွားပေ။
စတုတ္ထအချက်အနေဖြင့် စက်ကရိယာများမှ ဒီဇယ်ဆီ၏ ပျံ့နှံ့နှုန်းမှာ စောင့်ကြည့်ရမည့်အချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီဇယ်ပျံ့ လွင့်မှုနှုန်းကို လျှော့ချသည်နှင့် လူတို့၏ကျန်းမာရေးမှာ သိသိသာသာတိုးတက်လာနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့် လူတို့၏ကျန်းမာရေးတိုးတက်လာမှုမှာ ညစ်ညမ်းသောအရာများကို ထုတ်လုပ်မှုနှင့် တိုက်ရိုက် မဆက် စပ်ပါ။ ထုတ်လွှင့်သောပစ္စည်းကို တဝက်လျှော့ချခြင်းသည် လူသေနှုန်းမှာ တဝက်လျော့ကျမသွားပါ။ ဥပမာ တရုတ်ပြည် အရှေ့ပိုင်းတွင် ၂ဝ၁ဝ နှစ်က ဆာလဖာအောက်ဆိုက်ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကို (၅ဝ) ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချခဲ့ရာ လူတို့၏သေနှုန်း မှာ သိသိသာသာမပြောင်းလဲခဲ့ချေ။ လေထုသန့်ရှင်းသွားသောအခါ အကျိုးကျေးဇူးမှာ တိုးပွားလာသည်။ ၁၉၇ဝ ခုနှစ်နှင့် ၂ဝ၁ဝခုနှစ်အတွင်း ဥရောပကောင်စီ၏အကြုံပြုချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့် သေနှုန်း ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းလျော့ကျသွားသည်။
လေထုအတွင်းသို့ ထုတ်လွှတ်သည်နှင့်ဆိုင်သည် ပေါ်လစီများမှာ နေရာဒေသကိုလိုက်၍ ပြောင်းလဲနေရသည်။ သို့သော် အာရှ နိုင်ငံများ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖရိကတိုက်နိုင်ငံများသည် ကုလသမဂ္ဂမှ United Nations Convention on Long Range Transboundry Air Pollution စာချုပ်ကိုလက်မှတ်မထိုးရသေးပါ။ လေထုညစ်ညမ်းမှုသည် ထိမ်းချုပ်မှုအနည်း ငယ်သာ လုပ်နိုင်သည့်တိုင် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရများတွင်သာ တာဝန်ရှိသည်။
ဓါတုပညာရှင်များက လေထုထဲမှ ညစ်ညမ်းသောအရာနှင့်လူတို့၏ခန္ဓာ မည်သို့ထိခိုက်နိုင်ပုံကို သိနိုင်ကြပါသည်။ လက်တွေ့ နှင့်သီအိုရီပေါင်းစပ်ပြီး အရေပြားကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကို လေ့လာနိုင်ကြပါသည်။ လူတို့ လေလမ်း ကြောင်းနှင့် ၎င်းရှိအရည်များနှင့်ပတ်သက်ပုံတို့ကို လေ့လာနိုင်ကြပါသည်။
နေ့စဉ်နှင့်အမျှ သာမာန်လူတစ်ယောက်သည် လေထု ၁ဝ,ဝဝဝ လီတာမျှ ရှူရှိုက်ပါသည်။ ရေကို ၂ လီတာမျှ သောက်ရပါ သည်။ ဤလိုအပ်ချက်ကို လူတို့၏ လိုအပ်ချက်တခုအဖြစ် ဖေါ်ပြနိုင်ပါသည်။ တနှစ်တနှစ်လျင် မသန့်ရှင်းသောရေကြောင့်မူ ၁.၈ သန်းမျှသေ ကြသည်ဟု ယူဆကြပါသည်။ လူတိုင်း အန္တရာယ်ကင်းသော ရေကိုရနိုင်ရေးသည် လူတို့၏အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
လေထုသန့်ရှင်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ တကမ္ဘာလုံး စံနှုန်းသတ်မှတ်ထားနိုင်လျှင်ကောင်းသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် စက်ရုံတခုကို လေထုညစ်ညမ်းမှုဖြစ်သည်ဆိုသည်နှင့် ပို၍ဥပဒေလျှော့ပေါ့သောနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကို တားဆီးပိတ်ပင်နိုင်ရပါမည်၊ ကုလသမဂ္ဂ ပါတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကော်မရှင်က ပေါ်လစီရေးဆွဲသူများနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်များကို စုစည်းခါ အဆုံးအဖြတ်ပေး နိုင်ရပါမည်။
ဓါတုဗေဒပညာရှင်များအနေဖြင့် ညစ်ညမ်းမှုကို တိုင်းသည့်ကိရိယာများကို တန်ဘိုးသက်သက်သာသာဖြင့် တီထွင်ကာ လူ တိုင်းသုံးနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးသင့်ပါသည်။ အာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖရိကနိုင်ငံများကို လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ် ပေးခြင်းသည် ပြည်သူတို့၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွင် အရေးကြီးကြောင်း ပြောကြားသင့် ပါသည်။
ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့က လာသောသတင်းတစ်ပုဒ်တွင် လေထုညစ်ညမ်းမှုသည်ဘေဂျင်းနှင့် အခြားမြို့ကြီး (၂၇) မြို့တို့ တွင်၂ဝ၁၆ နောက်ဆုံး ၃ လနှင့်စာသော် (၃၃) ရာခိုင်နှုန်းမျှလျော့ကျသွားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဘေဂျင်းမြို့တော်တွင် ၅၃% မျှလျော့ကျသည်ဟု ဂရင်းပိစ် (Green Peace) အဖွဲ့ကြီး ကခန့်မှန်းပါသည်။ ဤသည်မှာ မသေသင့်သော အသက် ၁၆ဝ,ဝဝဝ ကိုကယ်တင်နိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရက ညစ်ညမ်းမှုတိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက် ၂ဝ၁၃ ခုတွင် စတင်ကြေညာပြီး အကျိုး သက်ရောက်မှုများကိုစတင် တွေ့မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အိမ်များကို အပူပေးခြင်းကို ကျောက်မီးသွေးအစား Natural Gas ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ သို့ပါသော်လည်း ဂရင်းပိစ်အဖွဲ့က တရုတ်ပြည် တပြည်လုံးအနေဖြင့်ကြည့်သော် လေထုညစ်ညမ်းခြင်း သည် ( ၄) ရာခိုင်နှုန်းမျှသာကျသည်ဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ဤသည်မှာ ညစ်ညမ်းသောလေထုကြောင့် ကျောင်းများပိတ်ရ ခြင်း၊ လေယာဉ်ခရီးစဉ်များကို ဖျက်သိမ်းရခြင်းအခြေအနေမှ တိုးတက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Ref: Chemist can help solve the Air-pollution Health Crisis, John Lelieveld, Nature 16 November 2017
← ကာတွန်း Joker ● လက်တည့်စမ်းတုန်းပဲလား …
မှိုင်းဝေ ● ဇာတ်ကောင် →
April 30, 2012 April 30, 2012 Aung Htet
ဖိုးထက် – ပုဂံ၊ ထိုလင်မယားနှင့် မျိုးစောင့်ရန်ပွဲ
September 30, 2015 Aung Htet
October 7, 2012 October 7, 2012 Aung Htet